News | ShweBiz.com | Page 6
Perth မြို့ သဲအင်းတရားစခန်း Updates
တရားစခန်း စချိန် နှင့်တရားထိုင်ချိန်များ။ (Updated) ၂၀၁၉ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက် (အဂါၤ နေ့) ယောဂီအမည်စာရင်းသွင်းရန်စချိန် ညနေ ၄ နာရီ နှင့် ဆရာတော် ဘုရားကြီးမှတရားစခန်း ဖွင့်ပွဲ အမှာစကား မိန့်ကြားစတင်ချိန် ညနေ ၆နာရီတိတိ။ ၂၀၁၉ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)မှ မတ်လ ၅ရက် (အဂာနေ့) အထိ ၁။ နံနက် ၄း၃၀ မှ ၆း၀၀ နာရီ ၂။ နံနက် ရး၃၀ မှ ၉း၃၀ နာရီ ၃။နေ့လည် ၂နာရီ မှ ၄ နာရီ ၄။ ညနေ ၆နာရီ မှ ၈ နာရီ အထိ။ ၂၀၁၉ […]
ဝိဇ္ဇောဒယသဲအင်းဓမ္မရိပ်သာဆရာတော်ကြီး Perth မြို့သို့ကြွရောက်
ပြည်မြို့ ဝိဇ္ဇောဒယ သဲအင်း ဓမ္မ ရိပ်သာ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးသီရိ ဓမ္မ နှင့် ဆရာတော်ဘုန်းဘုန်းကေ၊ဆရာကြီးများ ၊ဆရာလေးများ သာသနာပြုအဖွဲ့ “ဒုတိယအကြိမ်မြောက် (၇) ရက်တာ လူသစ်တရားစခန်း-Australia, Perth” အတွက် ယနေ့ ၂၅.၀၂.၂၀၁၉ တွင် သြစတေးလျနိုင်ငံသို့ ချောမွ့စွာဆိုက်ရောက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
Free books for kids @BIGW
ယနေ့ Thursday 21 Feb 2019 မှစ၍ ၁၂ပါတ်တိတိ BIGW မှာ ကလေးများအတွက် classic storybook စာအုပ်တစ်အုပ်စီ FREE ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ကလေးစာအုပ် ၁၂မျိုး၊ ကလေးတစ်ယောက်လျှင် တစ်အုပ်စီ၊ တစ်ပါတ် ၁အုပ်နှုံး ဖြင့် ၁၂ ပါတ်တိတိပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ Limited Stocks ဖြစ်သဖြင့် ဦးရာလူစနစ် ဖြစ်သည်။ သုတေသနပြုချက်များအရ တစ်နေ့လျှင် ၁၀မိနစ်စာဖတ်ခြင်းဖြင့် သင့်ကလေးငယ်ကို တစ်နှစ်လျှင် ဝေါဟာရပေါင်း ၆သိန်းခန့်ထိတွေ့မှုဖြစ်စေသည်သဖြင့် childhood literacy ကို အထူးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည် ဟုဆိုပါသည်။
ယနေ့မှစ၍ Woolworths က နို့ဈေး တက်ပြီ
သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ မိုးခေါင်ရေရှားမှုတွေ၊ ရေကြီးမှုတွေ ဆက်တိုက် ကြုံနေရပြီးနောက် အခက်အခဲကြုံနေရတဲ့ နို့ထုတ်လုပ်ရေး လယ်သမားတွေကို ကူညီဖို့အတွက် Woolworths ဆူပါမတ်ကက်က ယနေ့ကစပြီး နို့ တစ်လီတာရဲ့ ဈေးကို ၁ ဒေါ်လာ အစား ၁.၁၀ နှုန်းနဲ့ တိုးမြင့် ရောင်းချတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတိုးမြင့်ရောင်းချတဲ့ငွေကို နို့ထုတ်လုပ်တဲ့ လယ်သမားတွေကို ကူညီမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Woolworths ဟာ သူ့ဆိုင် အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ပဲ ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ နို့တွေကို ၈ နှစ်ကြာ ရောင်းချလာပြီးတဲ့နောက် အခု တစ်လီတာကို ၁၀ ပြားနှုန်း ဈေးတိုးမြင့်မှာဖြစ်လို့ ၂ လီတာ ဗူးရဲ့ ဈေးက ၂. ၂၀ ဒေါ်လာ ဖြစ်ပြီး ၃ လီတာ ဗူးကတော့ ၃. ၃၀ […]
***NASA website ဖြင့်တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီး International Space Station(ISS) Perthမြို့ကို ဖြတ်သန်းသည်ကိုမြင်ရမည့် နေ့ရက်နေရာအချိန်အတိအကျကို ပြန်လည်ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ၁၉ရက်နေ့ည ISS မြင်ရမည့်မည့်အချိန်မှာ 8:48PM ဖြစ်ပါသည်။ မနက်ဖြန် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့မြင်ရမည့်မည့်အချိန်မှာ 7:57PM ဖြစ်ပါသည်။ အတိအကျမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။*** Date & Time | Visible | Max Height | Appears |Disappears Mon Feb 18, 7:59 PM |6min | 57° | 10° above WNW | 11° above SE Tue Feb […]
သြစတေးလျမှာ Prescription ဆေးညွှန်းနဲ့ပေးတဲ့ဆေးနဲ့ မတည့်လို့ တစ်နှစ် ကို လူ ၂သိန်းခွဲလောက်ဆေးရုံရောက်နေ
သြစတေးလျမှာ Prescription ဆေးညွှန်း ပေးတဲ့ဆေးနဲ့ မတည့်တဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့် နှစ်စဉ် ဆေးရုံတင်ရတဲ့ လူပေါင်း ၂သိန်းခွဲလောက် ရှိတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ် လို့ SBS မှ သတင်းဆောင်းပါးတစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ဆေးမှားပေးတာ၊ မသင့်မလျော် သုံးဆွဲတာနဲ့ မတော်တဆ ဒါတွေအားလုံးပူပေါင်း ပါဝင်နေတာကြောင့် ဆေးညွှန်းတွေကို ပိုမိုတင်းကြပ် စစ်ဆေးကြဘို့ကို ဒီအစီရင်ခံစာက တောင်းဆိုနေပါတယ်။ Source# https://www.sbs.com.au/yourlanguage/burmese/my/audiotrack/echnnynnai-epttaiechrai-akichkekaang-cculuu-250000-echrnuttngr?language=my
Perth မြို့က သောက်သုံးရေတွေ ဘယ်ကရ?
Perth မြို့ကြီးတစ်ခုလုံးက နှစ်စဉ်သုံးစွဲနေတဲ့ရေပမာဏဟာ 312 billion litres လောက်ရှိပါတယ်။ ဒီလောက်များတဲ့ရေတွေဘယ်ကရနေသလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ တကယ်တော့ Perth မြို့က သောက်သုံးရေတွေရဲ့ထက်ဝက်နီးပါးလောက်ဟာ ပင်လယ်ရေတွေကိုသန့်စင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ WaterCorp ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေအရ ရေအရင်းအမြစ်ကို ၁) 48% (Desalinated seawater – ပင်လယ်ရေကိုရေချိုဖြစ်အောင်ထုတ်လုပ်ခြင်း) ၂) 40% (Groundwater – မြေအောက်ရေ) ၃) 10% (Surface Water – ဆည်ရေ ၄) 2% (Groundwater replenishment – သုံးပြီးသားရေဆိုးကိုပြန်လည်သန့်စင်ခြင်း) ကနေရရှိနေပါတယ်။ သောက်သုံးရေများရဲ့တစ်ဝက်နီးနီး၊ 48% ဖြစ်တဲ့ 150 billion litres လောက်ကို Desalination လို့ခေါ်တဲ့ ပင်လယ်ရေကို ရေချိုဖြစ်အောက်လုပ်တဲ့စက်ရုံ ၂ ခုကနေထုတ်လုပ်နေရပါတယ်၊ […]
မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Australia Awards Scholarship ကို 1 February 2019 မှ 30 April 2019 အတွင်း လျှောက်ထားနိုင်ကြပါပြီ။ Application Form နှင့် လိုအပ်သည့် Supporting Document များကို Online ဖြင့် https://oasis.dfat.gov.au/ Link တွင် လျှောက်ထားနိုင်ကြပါကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။ လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည်များကို အောက်ပါ Document တွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်လေ့လာလိုပါလျှင် https://dfat.gov.au/geo/myanmar/development-assistance/Pages/australia-awards-myanmar.aspx တွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါ Document ကို PDF ဖြင့် Download လုပ်လိုပါလျှင် https://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/myanmar-information-for-intake.aspx
Western Australia ေျမာက္ပိုင္း Pilbara ဖက္တြင္ Riley အမည္ရွိ Category2အဆင့္ Cyclone မုန္တိုင္း၀င္ေရာက္လွ်က္ရွိပါသည္။ Bureau of Meteorology WA မွထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေလတိုက္ႏႈံးတစ္နာရီလွ်င္ ၁၃၀ ကီလိုမီတာအထိရွိႏိုင္သည္ဟုသိရသည္။ Pilbara ဖက္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ Ashburton, Dampier ႏွင့္ Port Hedland တို႕တြင္ မုန္တိုင္းမဝင္မီႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ သေဘၤာမ်ားကိုရွင္းလင္းလွ်က္ရွိသည္။ Record breaking heat for #Adelaide (46.6°C), the coolest Jan day in 30 years at the airport at #Albany (17.8°C) and Tropical #CycloneRiley moving parallel […]